Home Wararka Maxkamadda CXD ee Puntland oo saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay...
Maxkamadda CXD ee Puntland oo saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay nin loo haystay dil
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa saaka oo Axad ah xukun dil toogasho ah ku fulisay Maxamed Cabdulqaadir oo heysto fal dil ah oo uu bartamihii sanadkii hore u geystay Bootaan Cawl.
Toogashada lagu fuliya Maxamed Cabduqaadir Muuse (Af-dheere) ayaa ka dhacday fagaare ku yaalla Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal, waxaana toogashada goobjoog ka ahaa Ehelada Marxuum Bootaan Cawl oo ka tirsanaa Ciidanka PMPF.
Allaha u naxariistee Bootaan Cawl oo ka tirsanaa Ciidamada hay’adda PMPF ee Puntland ayaa waxaa 30-kii bisha September ee sanadkii hore 2021 lagu dilay Magaalada Garoowe ee Caasimadda Maamulka Puntland, xili habeen ah.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Puntland ayaa hore marar kala duwan waxaa ay xukuno dil toogasho ah ugu fulisay rag loo heystay dilal geysteen iyo xubno lagu eedeeyay inay tirsanaayeen Al-shabaab oo ay geysteen dembiyo kala duwan.
Previous articleSoomaali badan oo loo diiday sharciga Canada oo loo soo musaafuriyay Soomaaliya
Next articleCiidamada AMISOM ee ku sugan xerada Maslax oo xalay la weeraray
Galmudug oo sheegatay in ay howlgalo ku dileen qaar kamida ururka...
Yaa ka danbeeya qaraxyada Muqdisho martida u ah?